Kusukela ezikhathini zasendulo, lapho imithetho the zenzisa Prince Andrew Bogolyubskii, futhi kwaba ngekhulu XII, endaweni oqinile izinhliziyo abakhileyo neRussia yama-Orthodox wathatha iholide, asikhumbuza indlela ibandla Blachernae Church bavikela ezitheni omophorion fair eNcasakazini uMariya. Wonke amasevisi yalesi abantu usuku nosuku begcwele emaculweni bedumisa Iningi Pure uMkhulumeli yethu - iNdlovukazi yezulu, qiniseka ukugubha tropar NokuVikelwa Virgin oNgcwele futhi kontakion abhalwe udumo kuye.
Miracle elizivelelayo osebeni Bosphorus
Umi lo mkhosi wokukhumbula ngokuyisimangaliso kwabakhileyo inhlokodolobha WaseByzantium kusukela ayehlasela Saracens e 910. Ukuqinisekisa ukuthi bona ukubhekana izinkulungwane eziningi izindimbane izitha, izakhamuzi babuthana umlindelo esontweni Blachernae, lapho wagcina engcwele kunazo - ibhatshi lonke le-iNdlovukazi yezulu. umlando Engcwele isitshela indaba emthandazweni ophithizelayo ethempelini yayisibetha kanjani ukushaya usizo kuye emzini ovinjezelwe.
Ngokwe-legend, phakathi kwabakhulekeli babengamakhulu amabili - Fool oNgcwele Andreya umlandeli wakhe othembekile we Epiphany elibusisekile. Ngingalindele zonke ebusuku ophahleni ithempeli laphela, futhi khona esikhanyayo ukukhanya. Futhi sibonile ngabantu abangcwele Engcwele Virgin umama kaNkulunkulu, kulandelwa amabutho ehlukene nemizimba abangcwele bakaNkulunkulu.
Indlovukazi yamazulu 'wathandaza iNdodana Yakhe ukukhululwa emzini villains. Lapho ithuliswe ngamazwi okugcina umthandazo asithatha up omophorion zakhe zinobulungisa futhi wayendlala phezu kwabo bonke, uyambuza ukuvikela. Ngakusasa emashalofini Saracens waphakamisa kweConstantinople, futhi usheshe ancipha, azenzanga mzamo wokubuya bawuthathe umuzi.
Holiday, efakwe Andrew Bogolyubsky
Igama lesiGreki Church, alondoloze inkumbulo isimangaliso, nakuba ungenziwanga usuku lapho uzibophezele inani amaholide abo. Futhi kuphela oNgcwele laseRussia laqala ukuba aligubhe kanye nabanye izinsuku zesonto. Lo mcimbi elalinikezelwe ethempelini eMoscow abadumile, eyaziwa ngokuthi Cathedral Vasiliya Blazhennogo. Lahunyushelwa Slavic Life of St Andrew Fool, obuye abhalwe ngokuthi lo troparion futhi Kontakion the Virgin oNgcwele. Sizobe ukukhuluma kabanzi ngazo.
Troparion - ifomu ekhethekile womthandazo chants, ezakhiwe ngendlela yokuthi idluliselwa ngesikhathi esifanayo okushiwo izenzakalo lodumo, futhi uyabavuza udumo noma ezinye saint noma umcimbi behlonipha okuyinto lihlelwe ukunqoba. Ngokufanayo okulungiselelwe kanye Troparion the Virgin oNgcwele.
Umbhalo chants iqukethe isicelo UnguNina KaNkulunkulu kuzo zonke "ukukhanya" sigubha eza kuye abasindise labo abethemba ezithombeni ukunakekelwa wakhe, futhi wenze isibonakaliso umgubuzelo ongcwele. Ukuthi lokhu okushiwo iholide. Akukhona nje mayelana inkumbulo yalokho okwenzeka eminyaka eyishumi nanye edlule, isimangaliso, kodwa nesethemba ezikhathini ezinzima sokubuyisa lokulabhela 'indlovukazi yamazulu'.
A iculo okudumisa Virgin oNgcwele
Troparion the Virgin Ongcwele kuyinto ngesikhathi esifanayo futhi iculo wakhe wokudumisa. Leli vesi lithi abakhulekeli babize Mediatrix waseZulwini, naphezu "endlela elungile" zalo. Unalokho iza umugqa yombhalo Umama abadumile kaNkulunkulu Yomthandazo - "It is ukuhlangabezana ngempela".
Kuyo UnguNina KaNkulunkulu ubizwa ngokuthi i "ikherubi ngokwethembeka", elisho Slavic ukuhlonipha amakherubi kwakhe okuphakeme, izingelosi, okusho okuqondene esiseqophelweni eliphezulu wezulu. Troparion the Virgin oNgcwele, umbhalo safinyelela kithi kusukela kudala, ke iyisibonelo esivelele-Orthodox iholide hymnography.
Kontakion - WaseByzantium izinkondlo kunomsindo
Noma ngubani zesonto, bangakufakazela ukuba indlela egcwele chants nobungqabavu umthandazo emibhalo inkonzo samaholide ku lokulabhela laseTheotokos. Troparion, Kontakion, ukukhulisa futhi akathist kukhona izingxenye zayo ebalulekile. Bonke bangabangasokile egcwele uthando ukukhanya yobuKristu. Kontakion - uhlobo amaculo esontweni, eyaqala kusukela izinkondlo WaseByzantium nezintshumayelo anikezelwe uhlobo oluthize iholide othize.
Kontakion, elalinikezelwe Virgin Mary
Ekuqaleni kobuKristu kontakia wabalwa ekuseni yalotshwa njengezingoma zohlobo oluthile izinkondlo mnogostrofnyh. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba isimo sabo sashintsha, futhi kube yilolu suku benza waluthola tematheksthi Orthodox ebiyelwe mavesi amabili, owokuqala othiwa Kondakov, kanye ICOS yesibili. Njengoba troparion the Virgin oNgcwele, kontakion kulotshelwe leli holide, athwala incazelo abalulekile.
Umbhalo udvweba sitfombe kanjani lolu suku Esontweni UnguNina KaNkulunkulu ukuba engabonakali, umthandazo unyuka kuze kube Okuphakade eNdodaneni yaKhe ukuze kusindiswe labo abakholwa kuye. Amazwi akhe benanela aphethe ezingenakubalwa yimimoya eyalahlekelwa imizimba yayo abakhulekela unyawo King weZulu. Ngakho, kokubili Troparion the Virgin oNgcwele, kontakion baphathe okujayelekileko - themba lika Ukuvikelwa wasezulwini kubantu abaphethwe usizi yasemhlabeni nokuswela. Lokhu kulandela kusukela ngokwemvelo yabo. Kodwa ngalolusuku ethempelini umsindo, hhayi kuphela Troparion futhi Kontakion. NokuVikelwa Blessed Virgin Mary, ethandaza umbhalo yokukhulekela yakhe futhi efunda Akathist ngokuvamile laseTheotokos lesizwe, angeke wacabanga ngaphandle uhlobo ebaluleke kakhulu amaculo zemikhosi - inkazimulo.
Ukukhazinyuliswa waMandla waseZulwini
Olunye uhlobo chants, waba lwemidlalo wedili Orthodox kuyinto isikhulisi. Leli vesi, eyenziwa ngesikhathi isevisi, ithwala Udumo ukukhazinyuliswa izenzakalo ongcwele noma engcwele, ogama inkumbulo lugujwa. Ngosuku lomkhosi bonke abakhulekeli, enika ukukhazinyuliswa Our Lady nekhava yaso enhle, shayela ofakazi uzibophezele isimangaliso sakhe St. Andrew, abambonayo ngithandaza, futhi ubabonisa omophorion yakhe phezu izilaleli ku Blachernae Isonto eminyaka eyishumi nanye edlule.
Ososayensi isinyathelo eduze kudalwa umuthi esethola ngoba amadoda
Peripheral. Izimpawu, Izimbangela, Ukwelashwa